Axdiga Cusub The — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Axdiga Cusub The
Waxaan samayn music nool a. Oo qaar badan oo idinka mid ah sidoo kale og, nooca music waxaan samayn wax yar ka duwan heeso aad u maqlin adeega CHBC a. Waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan hip in aad u kala duwan ka badan qaybaha kale ee music. wax ka mid ah in aan gaar u hip hop, laakiin waa ku badan yahay remix ah.
Waa maxay sida caadiga ah dhacdaa la remix ah waa in aad qaado hees aad hore u sameeyey oo aad u remix. Waxaad sii xubno ka mid ah asalka ah, laakiin waxa kale oo aad ka beddesho waxyaabaha qaar in ay ku riday wareejin cusub waxa on. Sidaas waxaa laga yaabaa inaad ku dari lyrics cusub, ama garaaca cusub, ama hab ka duwan in wax la mid ah. Laakiin mid ka mid ah gool waa in la siiyo wax dhegeyste cusub iyo xitaa hagaajiyo on gabaygii.
Well Axdiga Cusub, oo wadahadalo ku saabsan qoraalka caawa our, waa ku dhowaad sida remix a. Waxaan idinku leeyahay, maxaa yeelay, Ilaah ballan qaadayaa inuu axdi cusub dadkiisa ka dhigi, laakiin wax walba oo ku saabsan ma aha cusub. Dabeecaddiisa uusan waxba iska badalin, ballamihii uu wax ka beddeli mayso, Isaga oo ujeedadu guud ahaan wax ka beddeli mayso. Laakiin waxaa jira waxyaabo qaar ka mid ah oo ku saabsan Axdigan in ay yihiin gebi ahaanba kala duwan. Oo sababta oo ah dembigii, axdiga hore uma shaqeeyaan. Sidaa darteed, Ilaah hagaagtay waxay la mid cusub. Waxa aan ahaa qorshihiisa B, wuxuuse oo dhan la qorsheeyay in axdiga cusub in Wiilkiisa keeni lahaa ku saabsan dhigi. Oo waxaan ka akhrisan ku saabsan Axdiga Cusub this ee Yeremyaah 31.
Aan idin siiyo soo jeeda qaar ka mid ah ka hor inta aan akhriyey qoraalka.
In Baxniintii, ka dib markii dadka Ilaah ayaa la dulmay iyo Nicma Masriyiintu, ayay u qayliyaan isaga u samatabbixinayo. Oo wuxuu iyaga ka samatabbixiyey in fashion riwaayado toban belaayo iyo jeestay Fircoon qalbigiisii, iyo tageynaa Badda Cas. Ka dib markii Ilaah ayaa u dhiibay dadka Israa'iil, wuxuu iyagii axdi kula wuxuu ka dhigaa. Waxa uu sheegay in, "Haddaba sidaas daraaddeed, haddaad daacad ahaan ii addeecaysaan oo aad axdigayga dhawraysaan, aad ahaan doonaan hantidiin aan qiimo badanna dadyowga oo dhan ka dhex…" (Baxniintii 19:5). Wuxuu iyaga ku xusuusinayaa of waxa uu sameeyey ay ka wakiil. Waxa uu iyaga ka siinayo 10 amarradayda in ay yihiin in la raaco. Ilaah ballan qaaday in ay iyaga waan barakayn haddii ay yeelaan, oo iyaga hana habaarin, haddii ay ku caasiyaan. Markaasaa dadkii waxay ku heshiiyaan in ay axdigan oo waxaad ka samaysaa dhaar in Eebe adeeca.
Sanqadhaha ka xaq weyn? Just sameeyo waxa uu sheegay in iyo wax kasta oo noqon doona ganaax. Waxay noqon doonaa hanti Ilaah, Wuxuuna barakayn doonaa, oo waxay si farxad leh ku noolaan doonaa. Dhibaatada waxa ay tahay ma ay isaga u addeecaan. Ma ay xajin inay dhinac ee heshiiska. Oo sidaas daraaddeed waxaan ka heli nafteena in markii Yeremyaah.
Buuga Yeremyaah waa horrayn buug ku saabsan xukunka. Inta badan kitaabka waa Ilaah canaantay dadka iyada oo uu Nebi Yeremyaah Faasiq, iyo wax sii sheegid oo ku saabsan halaagoodii. Laakiin waxaa jira dad tiro yar (30-33), halkaas oo aannu text waxaa maanta la helay, taas oo Ilaah baa iyagii ka suura gelinayaa oo go'an iyaga, inkastoo iyagoo caasi ah, iyo wax sii barakeysan wuxuu ku shubi doonaa iyaga on. Maalin maalmaha ka mid ka dib oo dhan halligaadda this, Waxa uu u socday si ay u soo celiyaan. Oo isna wuxuu iyagii u sheegay Axdiga Cusub this uu socday la dhigan iyaga iyo. Iyo in waxa aan dooneynaa in aad ka fikirto maanta. Waxaa jira dad badan, waxyaabo badan oo aan la odhan karaa oo ku saabsan Axdiga Cusub, laakiin waxaan dooneynaa in ay diiradda saaraan hal aayadda saaka.
Dhegayso waxa uu sheegay in.
"Kanu waa axdiga aan la dhigan doono reer Israa'iil wakhtigaas ka dib,"Rabbigu wuxuu leeyahay,. "Waxaan aan sharciga ay mindsand gelin doonaa waxa qalbigoodana waan ku qori.
aniguna Ilaahooda baan ahaan doonaa,oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan. " (Yeremyaah 31:33)
Waxaan rabaa in aan farta ku afar wax waa in aan shukriya iyo Ilaah ku ammaanaan, waayo, sida aan milicsato text this.
waxaan. Ilaah ma Caalami shaqaynta
Qoraalka ayaa sheegay in, "Kanu waa axdiga aan la dhigan doono reer Israa'iil…" Waxay u egtahay sidii wax qaran xaq u? Sidaas sida ay tahay in Axdiga Cusub waxa Ilaah la shaqeeya caalamka?
Well ku jira Baxniintii, Ilaah baa axdi ula dhigtay dadkiisa reer binu Israa'iil ka dhigi. Oo In macnaha guud ee kitaabka Jeremiah, this axdiga cusub waxaa sidoo kale lagu sameeyey quruunta reer Israa'iil. Waxaa jira qaar ka mid ah furayaasha iska cad in Ilaah la qorsheeyay in ay shaqada ka sameeyaan meel ka baxsan Israa'iil, laakiin waqti si toos ah Ilaah waa samaynta yaboohay yabooh run ah in Ummadda reer Israa'iil iyaga soo celinta.
Markaasaa Ciise u imanayaa inuu dhulka, Isaga oo diiradda si cad u yahay on Yuhuudda. In Matthew 15:24, Ciise wuxuu ku yidhi, "Waxaan soo diray oo kaliya in ay idaha lunsan oo guriga Israa'iil." Laakiin dabcan wuxuu dadka Israa'iil oo isaga ka gaaloobay oo dhammaadka Injiilka Matthew, Qorshaha waa cad. Waxa uu sheegay in ay "ka dhigi xertii,"Ma ahan oo keliya ee Israa'iil, laakiin quruumaha oo dhan.
Oo waxaynu aragnaa si cad ku sugan Falimaha Rasuullada oo dhan ee Axdiga Cusub, in shaqada Ilaah ee dembilayaasha badbaadinayo ayaa la ballaariyey. xataa wuxuuna diraa Rasuulkiisa ugu badna, Paul, si gaar ah dadka aan Yuhuudda ahayn. Waxa uu diiradda ma aha on a dadka qaran, laakiin on an dadka caalamiga ah.
Oo waa in aan Ilaah ku ammaanaan for this! Qofna ma mudna in la badbaadiyey iyo soo celiyey Ilaah, si uu u roonaaday inay dadka soo furan Israa'iil ka. Oo wuxuu sii inuu ahaado mid raxmad by bixiya badbaadada in ay dhan oo naga mid ah. Waa ku dhowaad sida dadku ay u dhimanayaan harraad, iyo hal qof oo kaliya ayaa biyaha. Oo markii hore u muuqatay biyaha ahayd oo keliya ay heli karaan carruurta. Laakiin ka dibna waxaan u ogaato biyaha la heli karo si dhan oo naga mid ah. Waxa ay ahayd weyn in carruurta la badbaadin karo, laakiinse haatan waxaan ka heli kartaa oo dhan oo naga mid ah soo baxay. Habka ugu weyn ee sawir this gaaban dhaco waa in aan u qalmaan in ay u dhintaan oon. Laakiin Ilaah raxmad leh ayaa bixiya dhammaan oo naga mid ah badbaadada in aan u baahanahay.
Waxaan qabaa inay cadeyd aniga ma ahi ka soo jeeda Yuhuudda. Qaar ka mid ah oo naga mid ah ayaa halkan caawa. Waxaan qabaa inay tahay ammaan in la yidhaahdo in oo naga mid ah ugu badan ee halkan ma yihiin Yuhuuda. Sidaas qaar ka mid ah noo ah waa in si gaar ah amaan. In Eebe ka dhigay lahaa ishiisa noo on sidoo iyo in uu soo diray Masiixu waa inoo. Sida Efesos 2 ayaa sheegay in, "Haddaba sidaas daraaddeed xusuuso in hal mar aad dadka aan Yuhuudda ahayn jidhka ku… xusuusataa inaad at Waagaas Masiix oo kala duwan, ajanabi uga noqdeen dawladda reer binu Israa'iil iyo shisheeyahana axdiyada ballanka, idinkoo aan rajo lahayn oo Ilaah oo aan dunida oo dhan. Laakiin hadda in Ciise Masiix kuwiinna mar hore fogaa, ayaa lagu soo dhoweeyey dhiigga Masiixa. " (Efesos 2:11-13 ESV)
Ilaah ammaana in uu inaga tegin fog, wada rajo la'aan, iyo isaga oo aan. Ma uusan u leeyihiin in ay arrintan loo sameeyo, laakiin sida aynu ognahay waxa ay ahayd qorshihiisa oo dhan. Oo waxaannu og nahay halka ay sheekada dhamaado. Sheekadu waxay dhammaataa shacabka ka soo dhacay quruumihii oo dhan iyo afaf ku wada Cirka New iyo New Earth wanka Sujuudi. Maxaa yeelay, "by [Isaga oo] dhiig [Waxa uu] dadka furtay waayo, Ilaah ka qabiil kasta iyo af kasta iyo dad iyo quruun " (Rev 5:9).
Sidaas daraaddeed waa in saamayn habka aan xitaa hadda wada nool sida jidhka Masiixa. Sida dadka Ilaah, waxaan waa in la isku dayayaan in ay nolosha wada sameeyo hab u muujinaysaa off qorshaha Ilaah si loo badbaadiyo dad kala duwan. Mararka qaarkood aan kaniisadda sameeyo baabtiiskii Subaxnimada Axada. Oo anigu waxaan jeclahay in aad eegto halkaas oo arag dad kala duwan siinaya markhaatifurkaaga. Dhammaantood waxay leeyihiin dhaqamada kala duwan, laakiin waa nimcada Ilaah ee lagu badbaadinayo goob joog ka ahaa oo dhan oo iyaga ka mid. Taasi waxaa la sheegay in laga yaabo oo halkan maanta. Waxaan Ilaah ka baryayaa in marka dadka dhexdooda naga kaniisad iman, Waxayna layaabeen lahaa shaqada Ilaah ee nolosha cayn badan oo kala duwan oo dad ah. Waxaad aan la badbaadiyey by da'daada ama tartanka. Ma jiro isreebreebka ahayn iyagoo kuwa baahanna. Oo kulligood inaga mid ahayn kuwa baahanna.
Dad badan oo waawayn aan la kulmo ma waxan u garan. Waxay u malaynayaan Ilaah oo keliya badbaadiyay laba nooc oo dadka: sidoo kale dad nacasiin cad jir ama ayeeyooyin madow jir. Laakiin ma ahan mid run ah, xaq u? Kitaabka waxaa cad in "Qof kasta oo magaca Rabbiga ku dhawaaqaa, uu badbaadi doono ugu baaqaysaa." Ma aha oo kaliya dadka hodanka ah, ama dadka saboolka ah, ama dadka waayeelka ah ama dadka dhallinyarada ah, ama dadka Yuhuudda ama dadka caddaan ama dadka madow. No, Ilaah ayaa waxa uu dalab oo dhan.
Waxaan, sida kaniisad, waa in ay ka baqin wax ka dhigaya samaynayaan in ay u muuqato sida Ilaah oo keliya badbaadiyay nooc ka mid ah qaar ka mid ah qofka. Taasi qarsoodiga quruxda badan ee Axdiga Cusub. Taasi waa mid ka mid ah waxyaalaha ee Injiilka in Ilaah badbaadin lahaa mid dembi kasta oo ay Iimaan dhigeysa in Masiix. Waxa aan diiradda saaray ama ku koobnayn hal wax group.
Sida kaniisad, waxaan laga yaabaa oo dhan ma ka soo degeen meeshii isla, waxaana laga yaabaa in aysan haysan jeeda isla qowmiyadaha, laakiin waxaan leenahay wax weyn ka dhexeeyeen. Waxaan nahay in axdiga la Ilaaha nool xagga Masiix. Iyo in wayn.
Tani waxay sidoo kale waa sababta aan waa diri adeegayaashan oo Ilaah u barya, waayo,! Tani waa sababta qaar ka mid ah oo naga mid ah waxay u baahan yihiin in ay alaabahooda bacaha ilaa iyo tago! Maxaa yeelay, Ilaah ayaa axdi cusub dhigay, oo uu ka mid ahaa quruumaha. Qof noo sheegeen iyo qof u baahan yahay si ay u tagaan iyaga ku tidhaahdaa.
Sidaas inkastoo wadahadalo qoraalka ku saabsan axdiga Ilaah ula dhigtay reerkii reer binu Israa'iil, waxaynu og nahay in uu qorshaha la ballaadhiyey. Ha Ilaah ugu mahad naqi ka shaqeeya caalamka. Maxaa dhabta sugaya shaqada sida? In waxa siyaabo kale oo axdigan noqon doonaa cusub?
II. Ilaah ma Gudaha shaqaynta
"Waxaan aan sharciga ku gelin doonaa uurkooda, oo qalbigoodana waan ku qori ay."
Uma maleynayo qoraalka waxa uu isku dayayaa inaan ka dhaansado qaar ka mid ah farqiga weyn ee u dhexeeya halkan kelyaha iyo qalbigaba. Waxaan u maleynayaa inuu kaliya la isticmaalayo laba eray oo kala duwan oo xiriiro in Ilaah la socday wax ka sameyn gudaha oo naga mid ah. tarjumaadaha kale ee la yidhaahdo "Waxaan aan sharciga gelin doonaa iyaga gudaha iyo waan ku qori doonaa on Quluubtooda."
Haddaba dabcan markii ugu horeysay Ilaah wuxuu iyaga siiyey Sharciga ah, Waxa uu ku qoray on loox oo dhagax ah. Laakiin Ilaah wuxuu yidhi, "Maya, Wakhtigan agagaarka waxaan doonayaa inaan ku qor on Quluubtooda. "Markii ugu horeysay Ilaah wuxuu iyaga siiyey sharciga, Wuxuu ku rid hore iyaga ka mid ah. Laakiin Ilaah wuxuu yidhi, "Maya, Wakhtigan agagaarka, Waxaan doonayaa inaan sharcigayga saaray gudaha iyaga ka mid ah. "
Waxaan caadaysteen in ay fikirka waxyaalaha qalbiga ku jira sida diiran a, meesha haydh gudaha. wadnaha la xidhiidhka iyo Maalinta Jacaylka iyo jacaylka Waxaan wadaajin. Laakiin, kitaabku waxa qalbiga ku badan in ka badan oo kaliya meel fudud dareen waa. In Qorniinka, qalbiga waa nin gudaha dhan. Waxaa ka mid ah dareenkeena, laakiin waxaa kale oo ku jira maskaxda our, noo tahay doonista, iyo waxay doonayeen our - wax kasta oo gudaha ka dhaca. Erayga Cibraaniga dhab ka dhigan tahay oo calooshoodana, maxaa yeelay, in sanamkii waxay isticmaali. Waxaan u isticmaali wadnaha erayga.
Qalbigu waa at muhimka ah ee wax kasta oo aan samayn. Waa sida nidaamka GPS in Dardaarmi falalka oo ah. Dhibaatada waxaa uu ka jabay. quluubtanadu waxay dembi miidhan qabaa khalad, iyo dareemaan khalad, iyo khalad dooni. Oo oon Caasinay Ilaah, sababtoo ah ee muhimka ah ee cidda aynu nahay, nahay khalad.
No arrinta wixii aan ku sameeyey waxaan bar aan kor laga yaabaa. Oo aan loo eegayn waxa dembile Ruuxii fala, iyagu ma ay tahay inay awoodaan inay kaliya Darbada ilaa xoogga u dhawrtid sharciga Ilaah si fiican u.
Tanna waa sababta keentay sharciga Ilaah, sidii kaamil ah sida ay ahayd, marna na badbaadin karin. Tani waa sababta kaliya noo sheegaya wax sax ah in la sameeyo aan marnaba laga yaabaa inuu ku filan.
Waxa ay u muuqataa sida maanta, badan oo dood ah ay guushu ku nool nolosha sinaysta leedahay in la sameeyo waxa dabiiciga ah. Waxaan ku dhashay Hawadooda gaar ah sidaa darteed waa in ay xaq u noqon. Sidee waayeen
Ilaah weligiis uu dhib ka haysto wax uu dareensan yahay in si xaq, hadii ay noqon galmo guur ka hor, ama khaniisnimada, ama wax kasta oo arrimaha moral.
Runta waxa ay tahay qalbiyadeenna waa sidaas jabay oo wareersan, khalad ah in uu dareensan yahay xaq iyo xaq u dareensan yahay khalad. Marka xaaska noo cuncun waxa uu dareensan yahay xaq in la joogo in ay iyaga Ixtiraamdarro. Markii aan soo korayay daawashada qalad videos music, waxa uu dareemay in ay xaq damaca ka dib markii haweenka kuwa shaashadda. Marka aannu dakhliga ma aha arrin sax ah laga dareemayo xaq u khiyaameeyaan oo kaliya wax yar oo ku saabsan canshuurta our. quluubtanadu waxay noo trick. Dhab ahaantii meel kale kitaabka Jeremiah, wuxuu leeyahay, "Qalbigiisa ka khiyaano badan yahay wax walba ka sarreeya, aad iyo aad u buka; kuwaas oo u fahmi kara?" (Yeremyaah 17:9 ESV)
Waxa aan ahaa ku filan si ay u leeyihiin sharciga, maxaa yeelay, isagoo qalbiyadiinna ka dambi badan kaliya jawaabaan caasinimo. Ilaah lahaa in ay kor u noo furo, oo na siiyo xubin wadnaha ruuxi ah.
Shaqadan gudaha waa bartanka of this axdiga cusub iyo waa in aan Ilaah ku ammaanaan waxa loogu talagalay. Haddii Ilaah uma ammaanee shaqeeya gudaha oo naga mid ah weli waxaan lahaa rajo la'aan. Filiboy 2 wuxuu inoo sheegayaa, "Badbaadadiinna ku shaqaysta adiga kuu gaar ah cabsi iyo gariir…" maxaad? "Waayo, waa Ilaah kan idinkaga dhex, labada xagga doonista iyo xagga shuqulkaba farxaddiisa wanaagsan aawadeed. " (Filiboy 2:12-13 ESV)
Waa maxaa yeelay, ee uu shaqada gudaha oo naga mid ah in aan ka shaqeyno doonaa badbaado noo noqo. Waxaan dibadda shaqeyn karaan oo keliya maxaa yeelay, Ilaah waa ka shaqeeya gudaha ee qalbigayaga in dooni iyo inuu sameeyo wixii uu na ugu baaqay in ay. Ilaah waa bilaabaha iyo karti halkan. Waa in aan Ilaah ugu mahad naqi in shaqo la yaab leh.
Sidaas iftiinka runta this, taasi dhab ahaan waxa aan loo sameyn karo. Waxaan waa in la soo baxay ka shaqeeya badbaadadeenna. Waa in aan ku kalsoonahay in dagaalka aan dembi, ogaa in Ilaah waa inaga dhex shaqeeya. Ilaah ma aha oo kaliya fadhiya in Samooyinka ku qayliyo baxay amarrada at dadkiisa iyo xukumeen iyaga markii ay ku guul darreysato. Waxa uu si dhab ah u shaqeeya ee qalbigayaga ku ah inay naga caawiyaan isku halleeya oo Adeeca. Waxaan leenahay ma jirto wax cudurdaar ah raacdada caajis Ilaah.
Waxaa laga yaabaa in maanta aad dembiga la hardamaya qaar ka mid ah in aad dareento sida aan aad adkaan karo.
In lagu dhiiri. Ilaah waa idinku dhex jirtaa shaqada. Oo uu ka xoog badan dembi.
In aan naftiisa, Waxaan this ka arki kartaa si cad u. Ma aha inaan dambe halgan aadan, laakiin waxa si ka duwan. Waxaan xusuustaa karaan iyagoo jacayl la dembigayga. Ka dibna waxaan xusuusan isbedel halkaas oo ay i dhibayay. Xitaa ka hor inta aan bilaabay beddelo aan dhaqanka, Waxaan ogaaday in sida aan dareemay, iyo sidii aan ku fikiray, iyo waxa aan doonaysay beddelo. Taasi waxay noqon kartaa oo kaliya shaqada gudaha Ilaah. Oo waxaa jira waxba ka macaan daawashada Ilaah sameeyo in dadka kale. Maxaa yeelay, waxaan ku farxi karo oo waxaad ku tidhaahdaan, "Hey, Oo wuxuu sameeyey wax igu in aad!"
Tani waa nooc gaar ah midnimada in dadka Masiixiyiinta ah oo kaliya share daryeeli. Ilaah waa shaqada gudaha oo naga mid ah.
Waa in aan Ilaah ku ammaanaan waxa ay shuqulkiisa u sameeyaan gudaha.
III. Ilaah ma Interpersonally shaqaynta
Dhegayso qaybtii ugu dambaysay ee aayaddan. Ilaah ayaa sheegay in,
"Aniguna Ilaahooda baan ahaan doonaa,oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan. "
axdi ah in Ilaah samaynayo ma aha heshiis cad. Ma ahan oo kaliya qaar ka mid ah heshiis ah isaga inuu sameeyo wax wanaagsan, waayo,. axdiga Tani habaysan xidhiidh shakhsi ahaaneed la dadkiisa. Ilaah waxa uu kaliya ma u ballanqaaday inuu ina barakayn wax, Waxa uu ballan qaaday in ay na barakee xaggiisa la. Isagu wuxuu inoo yahay Ilaaha. Waxa aan jeclaan saxiixay heshiis kiro guri cusub. Marka aad samayn in, aad oo kaliya balanqaaday in ay bixiyaan kiro mulkiilaha bil kasta. Waxa aan jeclahay in. Waxaa jira shakhsi ah, jacaylka go'an oo halkaas Jacayl oo dhan tallaabooyinka uu xagga dadkiisa.
Oo waxaa jira nooc ka mid ah qaar ka mid ah lahaanshaha waxaa. Waxa uu nagu soo iibsatay oo dhiigga Wiilkiisa, waxaana iska leh isagaana u. Waxa ay i xasuusineysaa ah In Masiix Kalidaa line, "Waayo, anigu waxaan ahay uu wuxuuna anigaa iska leh. Iibsaday dhiiggii qaaliga ahaa oo Masiix."Ilaah ayaa had iyo jeer waxay doonayeen inay leeyihiin xidhiidh shakhsi ahaaneed la dadkiisa, oo taasuna waxay ahayd in ay sii wadaan la this axdiga cusub.
Christian, Ma waxaad u malaynaysaa in Ilaah u aqbalin sida Ilaahiinna, ama sida keliya Ilaaha? Marka aad u malaynayso in Ilaah uu yahay oo keliya wax abuura ee halkaas? Ama wuu baa Aabbihiin ah? Waxa uu yahay jeclaa ee naftaada?
Maxaa yeelay, sida aad isaga u eegto beddelo qaabka aad u jawaabaan Xaggiisa. Dadka reer binu Israa'iil ma ay nool sida haddii uu ahaa Ilaahooda. Waxay ahaayeen caabudno Sanamyada. Iyagu ma ay ahaayeen isku halleeyaa Kalimadiisii. Wax ku saabsan habnololeedkii ayaa sheegay in this ahaa Ilaahooda. Oo waxba ku saabsan noloshooda ayaa sheegay in ay ahaayeen dadka uu.
Kuwa naga mid ah, kuwaas oo ay ku kalsoon tahay in Masiixu waa dadkiisa. Ilaah ayaa Magaciisa ku tuntay noo on. Wax walba oo iska leh isagaana u, laakiin si gaar ah uu u eegay us at oo wuxuu ku yidhi, "Waxay anigaa iska leh." Oo nolosheena waa marag u furo runta this.
Marka Ciise wuxuu u kacay in iskutallaabta sida wadaadka sare, Waxa uu na siiyey helaan Ilaaha Caalamka. Waxaan la yaabanahay sida ay u beddeli lahaayeen noloshooda salaadda haddii aan Tumeeya runta in isagu wuxuu inoo yahay Ilaaha Oo innaguna waxaynu nahay dadkiisii. Waxaan qabaa saabsan Baxniintii, halkaas oo dadkiisa ah ayaa la addoonsado oo qoraal ah ayaa sheegay in, "Wuxuu maqlay oohin iyo xusuustay axdigiisii ​​uu awowayaashood." Christian, Ilaah ayaa naf ahaantiisa noo dhiibay si uu ma xaggiisa ka go'an in ay dadka oo dhan. Ilaah maqla Salaadaha iyo Had iyo jeer wuxuu ka jawaabi doonaa si naxariis. Isagu waa Ilaahiinna. Waxaad tahay mid ka mid ah dadkiisa.
Waxaan la yaabanahay intee ka badan raaxo waxaan dareemayaa lahaa ee ku dhex yiil maxkamadda haddii aan Tumeeya runta in isagu wuxuu inoo yahay Ilaaha Oo innaguna waxaynu nahay dadkiisii. Romans 8 na xusuusinayaa in aan waxba inaga sooci karin jacaylka Ilaah oo ku jira Masiix. Waxaan qabaa saabsan Joseph lagu iibiyey addoonsiga, oo waxay ku yidhaahdeen in waxa walaalihiis loogu talagalay xun, Ilaah damacsanaa wanaag. No arrinta noocee ah tijaabooyin aynu ku jirno ku dhex jira, Ilaah kaliya u isticmaali doona aannu wanaaggayaga iyo ammaanu. Isagu waa Ilaahiinna. Waxaad tahay mid ka mid ah dadkiisa.
Waxaan u maleynayaa in aan nolosha u gaar ah, jeer marka anigu ma this haleelaan, Waxaan ku samayn waxa Brad inoogu yeedhay in aan sameeyo saaka. Halkii dhagno runta inaan anigu ahay oo, wuxuuna anigaa iska leh, Waxaan bilaabi inuu ka soo leexdo noloshayda Christian galay tayo show a; halkaas oo aan wada oofin waayo, Ilaah iyo waxaan ka dhigi galay uu haybiyaan fiican haddii aan wada oofin fiican. Laakiin markii aan runta in Isagu waa Ilaah haleelaan oo aniguna waxaan ahay uu ilmaha, Waxaan doonayaa in aan isaga addeeca oo ka mid jacayl iyo reer shukriya fadligiisa. Aanan haysan si ay u qabtaan iyo soo bandhigaan naftayda Xaggiisa. Ilaah waa ila jiraa,. Bal yaan ahay dhalmada? Waxa uu dan ku saabsan quduusnimadayda badan baan u samayn. Isagu waa Ilaah. Waxaan ahay mid ka mid ah dadkiisa.
Waxaan on iyo tegi karin. Laakiin waxaa muhiim ah, in aan qabsoomayn qabtay a of this. Isagu wuxuu inoo yahay Ilaaha Oo innaguna waxaynu nahay dadkiisii. Oo waa in aan isaga ku ammaani doonaa, waayo, shaqada dhexdooda this badbaadada.
IV. Ilaah waa soo Work
Waxaan qabaa weedha ugu muhiimsan ee tuducdan waa labo eray yar waxaa laga yaabaa in aad u boodboodeen ka badan, ". Doono I" Ilaahaaga ahu wuxuu leeyahay, "Anigu axdi cusub baan la dhigan doonaa." Ilaahaaga ahu wuxuu leeyahay, "Waxaan aan sharciga gelin doonaa iyaga gudahooda." Ilaahaaga ahu wuxuu leeyahay, "Waan ku qori doonaa on Quluubtooda." Waxa uu sheegay in, "Waxaan noqon doonaa Ilaahooda ah oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan."
Walaalaha, this Axdiga Cusub aysan ugu dambeyntii ku xiran tahay in aad on. Waxay bilaabataa, kuna dhammaataa Ilaah. Ilaah waa kan lahaa qorshaha. Ilaah waa mid ka mid ah oo ahaa naxariis oo soo baxay markii ugu horeysay ee aan dembaabay ha naga qaado. Ilaah wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwaas oo u soo diray Wiilkiisa. Ilaah wuxuu ka mid ahaa oo uu cadho la soo daadshay on Masiix. Ilaah waa kan isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay ka soo. Ilaah waa kan idiin yeelay abuur cusub. Ilaah waa kan idin siiyey Ruuxa. Ilaah waa kan idin siiyey qalbi cusub. Ilaah waa kan la idin daahiriya. Ilaah waa kan kugu dhawri doonaa. Oo Ilaah waa kan idin ammaani doonaa. axdiga Tani bilaabataa, kuna dhammaataa Ilaah.
Ilaah waxaa ka go'an inuu u sameeyaa nafsaddiisa dad. Wuxuuna ku xaggiisa ka go'an in ay dadka.
Sida Mu'miniinta this noo keeno waa raaxada weyn. Maxaa yeelay, waxaynu og nahay in xitaa noo caasinnimada ma jebin karaysaan axdigayga this. Xitaa our nacasnimo ma ka dhigi kartaa axdigan ku guuldareysato. Maxaa yeelay, Ilaah waa shaqada, Waxa uu naftiisa ku noo dhiibay, oo ma ku guuldareysato.
Kuwani waa barakooyinka qurux badan in ay yihiin qayb ka mid ah Axdiga Cusub this. Laakiin runta waa kuwan waxaa lagu ammaanay kaliya ay heli karaan kuwa axdiga Ilaah la. Oo waxaannu gashaan axdiga Ilaah la marka aan ku kalsoonahay in nolosha, dhimashada, iyo sarakicidda kuwii Wiilkiisa, Ciise Masiix. Haddii aadan ogaan Masiix, aad dembigoodii ka soo noqdaan oo ay rumaysan isaga on maanta. Halkii cadhadiisu shubayso, Ilaah ku shubi doonaa hodantinimada madaxa kuu saaran yihiin, waayo, daa'in ah.
Waxaad arki kartaa, in sawirka rinji codadka idishay kaamil ah. Xaqiiqaduna waxay tahay ma jiro oo ka mid ah dhinacyada kala duwan ee Axdiga Cusub hadalnay la xaqiijiyay dhammaataan ilaa aan isaga la jira. Marka aynu isaga la tahay waan arki doonaa kaamilka ah, aroosadda saafi caalamiga ah ee Masiixa. Marka aynu isaga la yihiin waxaan noqon doonaa dadka la qumman yahay, qalbiyada saafi jecel Masiix oo dhan jidadkiisa of. Marka aan isaga la, waxaan yeelan doonaa xiriirka kaamil daraaddeed aannu Ilaahayo oo waxaan isaga ku ammaani doonaa sida dadkiisa. Ilaa markaas aan ku jiidhaya oo ku dadaalaan in ay maalin kasta isaga ku kalsoon tahay iyo aad u badan. Aynu ku tukado.